एक अद्वितीय अनलाइन अनलाइन स्लट केही अद्वितीय सुविधाहरू खेल, कार्य बैंक अनलाइन वास्तविक पैसा जीत ठूलो मञ्च हो. Gamblers स्लट खेल मा क्लासिक विषय प्रेम, तर सबै क्लासिक THEMED अनलाइन मोबाइल स्लट प्रगतिशील स्लट छन्. Barcrest किनभने यसको बोनस सुविधाहरू खेलाडीहरू ठूलो जीत मदत गर्न सक्छ कार्य बैंक शुरू गरेर राम्रो काम गरेको छ.
यो एक पाँच रील छ र 20 betline अनलाइन स्लट खेल केही रोचक प्रतीक सुविधा छ. Gamblers यो एकदम किनभने ग्राफिक्स र संगीत को अडियो गुणस्तर को आकर्षक फेला हुनेछ. पूर्ण जुवा मार्गदर्शन स्क्रिनको पक्ष तल दिइएको छ र त्यो पनि सुविधा स्वतः प्ले विकल्प.
प्रतीक र खेल-प्ले:
कार्य बैंक किनभने यसको प्रतीक को मुख्य रूप gamblers आकर्षित. यो खेल तीन मुख्य प्रतीक छ, रातो 7, एक्स र बार. यी तपाईं कताई रील मा देख्ने तीन प्रतीक हो. तपाईं पनि धेरै सेतो सर्कल भूमि गर्न सक्छन्, तर तपाईं इनाम छैन कुनै पनि पुरस्कार. यो खेल को दुई महत्त्वपूर्ण प्रतीक जोकर छन्, जंगली प्रतीक र सुनको भल्ट, स्क्याटर प्रतीक. यी केही ठूलो जीत र बोनस सुविधाहरू प्रदान गर्न सक्छन् किनभने सकेसम्म यी दुई प्रतीक धेरै पटक भूमि प्रयास.
खेल सजिलै चल्छ र यो दुवै ठूलो र सानो पर्दाका लागि पूर्ण छ. तपाईं अन्य अनलाइन मोबाइल स्लट जस्तै तरिकामा यसलाई प्ले, तर बोनस सुविधाहरू कार्य बैंक र अन्य अनलाइन अनलाइन मोबाइल स्लट बीच मुख्य फरक सिर्जना.
यो खेल केही ठूलो भत्तों कमाउन बाटो:
यो रातो 7s को अवतरण अनुक्रम तपाईंले केही प्रभावशाली multipliers कमाउन मा मदत गर्न सक्छ भनेर थाह त कठिन छैन. तपाईं आफ्नो स्ट्याक रकम को 500x सम्म जित्न सक्छौं र तपाईं को लागि एक प्रभावशाली जीत हुनेछ. जब यो हुन्छ सेतो सर्कल खेल सुनको सर्कल परिणत हुन सक्छ र, तपाईंले केही थप multipliers प्राप्त.
निःशुल्क स्पिन सुविधा छरिन्छ निर्भर. पाँच वा बढी स्क्याटर प्रतीक अवतरण लागि निःशुल्क स्पिन सुविधा हुनेछ. जंगली प्रतीक नै तरिकामा काम गर्दछ यो अन्य अनलाइन मोबाइल स्लट मा गर्छ रूपमा. यो एक राम्रो विजेता अनुक्रम सिर्जना गर्न अन्य प्रतीक प्रतिस्थापन गर्नेछ.
कार्य बैंक विशेषताहरु ठूलो बैंक बोनस सुविधा एक टिप्नुपर्छ राउन्ड ट्रिगर कि. तपाईं हीरा देखि एक प्रतीक छनोट गर्न सक्नुहुन्छ, माणिक या नीलम केही थप multipliers कमाउन.
कार्य बैंक thrill र कार्य धेरै को लागि एक सिद्ध अनलाइन स्लट खेल हो. यो खेल छ 95.16% RTP र तपाईं पक्कै पनि विजेता संयोजन लैंडिंग द्वारा Jackpot जित्न सक्छौं.